संवैधानिक अराजकताका चुनौती -
२७ पुष २०७५, शुक्रबार गोक्यो संवाददाता0Comments
काठमाडौं : संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार झन्डै एक वर्षदेखि कार्यरत छ। गुणात्मकरूपमा कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने यो सरकार निकै कमजोर देखिन थालेको छ। गठन भएको वर्षदिन बित्न पाउँदा-नपाउँदै शैली, स्वभाव र व्यवहारका कारण यसका अनगिन्ती कमीकमजोरी छरपस्ट हुन थालेका छन्। यो चिन्ताको विषय हो। सुशासन र सदाचारका हिसाबले सरकार असफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ। संविधानको कसीमा यो सरकारले गरेका केही महत्वपूर्ण तर संविधानको मर्मविपरीतका कामका विषय यहाँ उठाउन खोजिएको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखदेखि संवैधानिक निकायलगायत सबैले देश र जनकल्याणका निमित्त काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित पद तथा गोपनीयताको सपथ गरेका हुन्छन्। सपथ खानेले सत्य र निष्ठाका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रण गर्छन्। देशहितसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयमा बाहेक सत्तामा बस्ने जोकोहीलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समेत जनतासामु झुट बोल्ने सुविधा हुँदैन।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विवादमा संसदीय समितिमा उभिएर आफ्नो बचाउ गर्दै महालेखा परीक्षकसँग सल्लाह गरेर रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए। त्यसलगत्तै महालेखा परीक्षकले आधिकारिक रूपमा त्यसको खण्डन गरे। मन्त्री अधिकारीले पुस २३ गते आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा समेत आफूले झुट बोलेको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन्। सामान्य मानिसले त झुट बोल्नु हुँदैन भने पद र गोपनीयताको सपथ खाएकोे मन्त्रीजस्तो राज्यको उच्च पदासीन सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले झुट बोल्नु सपथविपरीत हुन्छ।
वाइडबडी विमान काण्डमा मन्त्रीको संलग्नता छ÷छैन भन्दा पनि आफूले बोलेको झुट प्रमाणित भएपछि मन्त्री पदमा बस्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। विभागीय मन्त्रीका हैसियतले सरकारका तर्पmबाट संसद्मा उनको भूमिका संसदीय मर्यादाअनुकूल भयो कि भएन त ? झुट बोल्ने मन्त्री संसद्का लागि स्वीकार्य हुन्छ भने अर्को मन्त्रीले झुट बोल्ने सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन ? यस्तो अवस्था संसद्ले बेहोर्नुपर्ने भयो भने त्यसपछि के हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हो।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको छाया संवैधानिक निकायलगायत यत्रतत्र सर्वत्र पर्न थालिसकेको छ। त्यसैले पनि लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजको काँधमा आइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले चाहे यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् मन्त्री अधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर। पद्धतिसामु व्यक्ति केही होइन भन्ने सिद्धान्तको हेक्का छ भने प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न सक्छन्। मन्त्रीले झुट बोलेको यो विषय सरकारद्वारा गठन गरिएको भनिएको जाँचबुझ समितिसँग सरोकार राख्ने विषयभित्र पर्दैन। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान तत्काल आकृष्ट हुन नसके संसद्को गरिमामै चोट पर्ने छ। सरकारको ओरालोलाग्दो विश्वसनीयताको ग्राफ झनै बढ्ने छ।
रक्षामन्त्रीले अनधिकृतरूपमा हत्यारा पक्राउ परिसकेको बताई हत्यारालाई राजनीतिक छाता नओडाउन विपक्षीलाई औंला ठड्याएर चर्चा कमाएका थिए। रक्षामन्त्री पोखरेलले बोलेको केही दिनभित्रै अभियुक्तको आशंकामा पक्राउ दुई युवा प्रहरीको हिरासतबाट मुक्त भए। यस घटनाबाट रक्षामन्त्रीले पनि जनतासामु झुट बोलेको प्रमाणित भएको छ।
खानेपानीमन्त्री विना मगरले मेलम्चीको पानी तीन महिनाभित्र काठमाडौं आउँछ भनी उद्घोष गरेको केही महिना नबित्दै उक्त आयोजनाका इटालियन ठेकेदार नै काम छोडेर भागेको भन्ने समाचार आयो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैनन्। प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीको त यो गति छ भने राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीको के गति होला ?
कैलाली जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिएका रेशमलाल चौधरी अदालतको आदेशपछि थुनामा थिए। टीकापुर प्रहरी हत्याकाण्डमा ज्यानमुद्दाको अभियोग लागेकै कारण नेपाल सरकारले चौधरीविरुद्ध वादी भएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। अदालतले आरोपको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी निजलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा लिई गृह मन्त्रालयमातहतको कारागारमा थुनुवाको रूपमा राख्न जिम्मा दियो। विगतमा सम्पन्न प्रतिनिधिससभाको निर्वाचनमा निज फरार थिए। उनले वारेशनामाका माध्यमबाट उम्मेदवारी दर्ता गरे। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पनि भए। संसद् सदस्यको सपथ हुन सकेको थिएन थुनामा रहेकै कारण।
उनीसम्बद्ध राजनीतिक दल संसद्मा सरकारसमर्थक भएकाले चौधरीलाई सपथ गराउन दबाब दिँदै आएको थियो। तर, कानुनबमोजिम अदालतको आदेशमा थुनामा परेको व्यक्तिलाई अदालतको आदेशबिना कार्यकारी आदेशको भरमा केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। निर्वाचित भएपनि उनी औपचारिकरूपमा सांसद बन्न सकेका थिएनन्।
यो सरकारको पालामा निर्वाचन हुने अवस्था नभएकाले निर्वाचन आयोग सरकारी छायामा परेको छ÷छैन भन्नेतर्फ टीकाटिप्पणी गर्नु परेन। न्यायपालिकामा राजनीतिक छाया परे÷नपरेको भन्ने कुरा यसपटकको संसदीय समितिमा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस माननीय न्याधाधीशको प्रस्तुति र समितिका माननीय सांसदहरूका बीच भएका सवालजवाफबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको छाया संवैधानिक निकायलगायत यत्रतत्र सर्वत्र पर्न थालिसकेको छ। लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी नागरिक समाजको काँधमा आइसकेको छ। “श्रीहरि अर्याल” को विचार अन्नपूर्ण पोष्टबाट
← भक्तपुरमा १५ वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, आरोपित ४ जना पक्राउ
सन्दर्भ राष्ट्रिय एकता दिवस : पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रनिर्माता कि विस्तारवादका नाइके ? इतिहास र बायोग्राफीसहित →
ओलीले यति गर्न सक्लान् ?
२१ माघ २०७४, आईतवार गोक्यो संवाददाता 0